Thwebula AccuWeather 4.3.4 – Vessoft
AccuWeather – a isofthiwe esinamandla ukubuka sezulu bekusasa emhlabeni wonke. Isofthiwe ikuvumela ukuba ukhethe umuzi ezidingekayo futhi ukuthola mayelana noshintsho of lokushisa, isivinini somoya, umswakama, ingcindezi, amazinga kwezulu njll AccuWeather kwenza ukubuka ngehora isikhathi eside sezulu in the form of imidvwebo. Isofthiwe iqukethe module izindaba ukulandelela izinguquko zakamuva sezulu nibuke izibikezelo video. AccuWeather baxhumana Google Maps ezibonisa ezingeni yefu isiqondiso zasezindaweni ezingxenyeni ezihlukahlukene zomhlaba. AccuWeather iqukethe amathuluzi ukuze wenze isikhathi format, silinganiso izinhlelo kanye nesaziso lesikhuthazimiyalo.
Izibikezelo zezulu emhlabeni
Ulwazi mayelana nezinguquko sezulu
Ukuxhumana nge Google Maps
Ukuba khona izinhlelo metric futhi British of units
Amazwana on AccuWeather:
AccuWeather Ahlobene software: